China Medical Oxygen Generator Hopitaly Oksizenina Generator Oxygène Generator fitaovana mpanamboatra sy mpamatsy | OR
Oxygène Generator Oxygène Hopitaly Oxygen Generator Oksizine Generator Oksigène medikaly
Fahaizana oksizenina: 3-400Nm3 / h
Fahadiovan'ny oksizenina: 93% -95%
Fanerena ny famoahana: 0.1-0.3Mpa (1-3bar) azo ovaina / 15Mpa Famenoana fanerena atolotra
Manamboatra zavamaniry oksizenina PSA izahay amin'ny alàlan'ny teknolojia farany PSA (Pressure Swing Adsorption). Amin'ny maha-mpanamboatra zavamaniry oksizenina PSA antsika voalohany, teny filamenanay ny fandefasana milina oksizenina amin'ny mpanjifantsika izay mifanandrify amin'ny fenitra iraisam-pirenena nefa tena lafo vidy. Mampiasa fitaovana kalitao premium novidina tamin'ny mpamatsy tsara indrindra amin'ny indostria izahay. Oksizenina novokarin'ny mpamokatra oxygen oxygen PSA anay dia mahafeno ny fepetra takiana amin'ny indostria ary koa ny fampiharana ara-pahasalamana. Orinasa marobe avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no mampiasa ny ozinina oxygen PSA anay ary mamokatra oksizenina eny an-toerana amin'ny fampandehanana ny asany.
Ny generator oxygen antsika dia ampiasaina any amin'ny hopitaly ihany koa satria ny fametrahana mpamokatra gazy oksizenina eto an-toerana dia manampy ny hopitaly hamokatra oksizenina manokana ary hampijanona ny fiankinan-doha amin'ny varingarin'okrazy novidina tamin'ny tsena. Miaraka amin'ireo mpamokatra oxygen azontsika, ny indostria sy ny andrim-pitsaboana dia afaka mahazo famatsiana oksizenina tsy tapaka. Mampiasa ny haitao farany ny orinasanay amin'ny fanamboarana ny milina oksizenina.
Seho miavaka amin'ny zavamaniry mpamokatra oksizenina PSA
Rafitra mandeha ho azy tanteraka dia natao hiasa tsy misy mpiambina.
Ny zavamaniry PSA dia kely toerana, mivondrona amin'ny skids, vita mialoha ary omena avy amin'ny orinasa.
Fotoana fanombohana haingana maka 5 minitra fotsiny hamokarana oksizenina miaraka amin'ny fahadiovana tadiavina.
Azo itokisana amin'ny fahazoana oksizenina mitohy sy maharitra.
Sivana molekiola maharitra izay maharitra 12 taona eo ho eo.
Previous: Zavamaniry oksizenina PSA ambony kalitao amidy mafana any atsimo Amerika atsinanana Asiawith kalitao azo antoka amin'ny fahombiazana avo lenta
Manaraka: Fifantohana avo lenta amin'ny indostrialy Psa Oxygen Generator PSA Oxygen Plant
Fitaovana mpamokatra Oksizenina fitsaboana
Generator Oksizena fitsaboana azo entina
Psa hopitaly fitsaboana Oksizenina
90% -99,9999% Fahadiovana sy fahafaha-miasa lehibe PSA Nitr ...
Ny fifantohana avo lenta amin'ny indostrialy Psa Oxygen Genera ...
Famoahana famaritana (Nm³ / h) fanjifana gazy mahomby (Nm³ / h) rafitra fanadiovana rivotra ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 PSA oxygen generator plant dia namboarina tamin'ny alàlan'ny swing Pressure Swing Teknolojia Adsorption. Toy ny tsara-k ...
Zavamaniry oksizenina PSA ambony kalitao amidy mafana ka ...
Famoahana famaritana (Nm³ / h) fanjifana gazy mahomby (Nm³ / h) rafitra fanadiovana rivotra ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: Indostrian'ny taratasy sy pulp ho an'ny famotsiana Oxy ary delignification 2: Indostria fitaratra ho an'ny enrichme lafaoro ...